Iitoliki zizinikezele kangange-110% kumboniso we-100% Stellenbosch | Language Centre
Posted on 16/04/2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news
Kungathini na ukuba iinkcukacha-manani bezinobuso?
Lowo ngumbuzo obunqwanqwada iprojekthi i-100%, neyaqala kwiminyaka elishumi eyadlulayo eJamani. Le projekthi ijolise ekuboniseni esidlangalaleni abantu abalikhulu abavela kummandla othile abaphendula imibuzo kwaye besenza ubalo-bantu olungagunyaziswanga – konke oko kusenziwa eqongeni. Ukulawula inkqubo yocweyo-msebenzi nabantu abalikhulu ngumcelimngeni owaneleyo, kodwa ithe xa iprojekthi ye-100% Stellenbosch ifika kule dolophu ngoFebhruwari kulo nyaka njengomboniso-weqonga we-Woordfees (kungexesha lokumbiyozela iminyaka elikhulu yeyunivesithi, ke ngoko!), omnye umngeni uthe waziveza: Abantu abalikhulu, ekumele bahambelane neenkcukacha-manani zabantu bommandla, abathanga bonke banolwimi olunye lwasekhaya. Kulapho ke iZiko leeLwimi lithe langenelela khona.
I-100% Stellenbosch ibe nezithethi zesiAfrikansi, isiNgesi, isiXhosa nezoLwimi lweZandla loMzantsi Afrika nabathe bonke bafuna ukuba bavakalise izimvo zabo kwaye baviwe kwaye aqondwe. Iitoliki zeZiko leeLwimi zithethe zalungelelanisa unxibelelwano gokutolika oko kuthethwa zikutolikela kwezinye iilwimi ezintathu. Ezi tolitki bezikho kucweyo-msebenzi, ziqinisekisa ukuba bonke abalinganiswa bayaqondana nanjengoko bebalisa amabali abo. Ngenxa lomboniso waseqongeni, bebekwatolikelwa abo babukeleyo.
Oku kwakuyinto eyahluke kakhulu koko iqela lotoliko leZiko leeLwimi eliqhele ukwenza. Amaxesha amaninzi badla ngokutolika izifundo zabahlohli kwiimeko zeakhademikhi, kodwa kwiprojekthi ye-100% Stellenbosch, bekufuneka bafunde kwaye baguqule imibuzo eboniswa kwiskrini esiseqongeni besenzela abalinganisi, batolike iimpendulo zabalinganisi bezisa kubabukeli nakubanye abalinganisi abanjengabo kwaye batolike imibuzo evela kubabukeli eya kwiqela labalinganisi. Xa uqwalasela ukuba iziqendu zaseqongeni ze-100% Stellenbosch zithabatha malunga neeyure ezimbini ubude, ngumsebenzi omkhulu nakweliphi na iqela!
Nangona kunjalo, iitoliki zethu zithe zikonwabele konke oko. Siyakhahlela kubo, abaququzeleli nakubathabathi-nxaxheba – bekunye benze le projekthi ayalibaleka tu.
Language Centre interpreters doing their part at the Woordfees
A linguistic adventure for international students
A mosaic of experiences at the oldest university in the world
Language CentreArticles in isiXhosa Dialogos Recent newsIitoliki zizinikezele kangange-110% kumboniso we-100% Stellenbosch